Who is Hussein (a.s) ? အဖွဲ့ဝင် များ ၏ အရ်ဗအီးန် တွင် လှုပ်ရှား မှုများ ၊ကရာချီ ။ ။photos
အောကျတိုဘာ ၂၁, ၂၀၂၀ - ၁၁:၅၈ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ ကရာချီ မြို့ တွင် Who is Hussein (a.s) ? အဖွဲ့ဝင် များ ၏ အရ်ဗအီးန် တွင် လှုပ်ရှား မှုများကို တွေ့မြင် နိုင်ပါတယ်။
အရ်ဗအီးန် အဇါဒါရီ ကျင်းပ ၊ ပါကစ္စတန် ။ ။ photos
အဗ်နာ ။ ။ ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ အလီပူးရ် ဂျသေဟ် မြို့ တွင် ရှီအာ မွတ်စလင်မ်များ မှ အရ်ဗအီးန် အဇါဒါရီ ကျင်းပ နေသည့် ပုံရိပ်အချို့ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဆဖရ် ၂၈ ရက် အဇါဒါရီ ပြုရန် ကရ်ဗလာ မှ နဂျဖ် သို့ ခြေလျင် လျှောက် လာကြသည့် အဇါဒါများ အပိုင်း (၂) ။ ။ photos
အဗ်နာ ။ ။ ဆဖရ် ၂၈ ရက် ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) ၏ ဝဖါသ် နှင့် အေမာမ် ဟစန် (အ.စ) ၏ ရှဟာဒသ် အတွက် အဇါဒါရီ ပြုရန် ကရ်ဗလာ မှ နဂျဖ်ဖေအရ်ှရဖ် သို့ ခြေလျင် လျှောက် လာကြသည့် အဇါဒါများ ကို အားရဖွယ် တွေ့ မြင် နိုင်ပါတယ်။
ဆဖရ် ၂၈ ရက် အဇါဒါရီ ပြုရန် ကရ်ဗလာ မှ နဂျဖ် သို့ ခြေလျင် လျှောက် လာကြသည့် အဇါဒါများ အပိုင်း (၁) ။ ။ photos
အောကျတိုဘာ ၁၇, ၂၀၂၀ - ၁၁:၄၈ ညနေ
အရ်ဗအီးန် အဇါဒါရီ ကျင်းပ ၊ အမေရိကန် ။ ။ photos
အောကျတိုဘာ ၁၅, ၂၀၂၀ - ၁၁:၅၆ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ အမေရိကန် နိုင်ငံ အိုဟိုင်းယို ပြည်နယ် ရှိ မရ်ကဇ် အေမာမ် မွန်သဇေရ် (အ.ဂျ) တွင် ရှီအာ မွတ်စလင်မ်များ မှ အရ်ဗအီးန် အဇါဒါရီ ကျင်းပ ခဲ့ပါတယ်။
အရ်ဗအီးန် အဇါဒါရီ ကျင်းပ ၊ နယူးဇီလန် ။ ။ photos
အောကျတိုဘာ ၁၂, ၂၀၂၀ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
အဗ်နာ ။ ။ နယူးဇီလန် နိုင်ငံ အော့ကလန် ရှိ မစ္စ်ဂျစ်ဒ် ဒေ အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) တွင် ရှီအာ မွတ်စလင်မ်များ မှ အရ်ဗအီးန် အဇါဒါရီ ကျင်းပ ခဲ့ပါတယ်။
အရ်ဗအီးန် အလံ လည် ရင်း အာယာသွလ္လာဟ် ရှိက်္ခ ဇက်ဇာကီ အား လွတ် ပေးရန် တောင်းဆို ။ ။ photos
အောကျတိုဘာ ၁၁, ၂၀၂၀ - ၁၁:၅၉ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန် မြို့ ရှိ ရှီအာ မွတ်စလင်မ်များ မှ အရ်ဗအီးန် အဇါဒါရီ ပြု အလံ လည် ၍ နိုင်ဂျီးရီးယား ခိုမေနီ ဖြစ်သည့် အာယာသွလ္လာဟ် ရှိက်္ခ ဇက်ဇာကီ အား လွတ် ပေးရန် တောင်းဆို ခဲ့ကြပါတယ်။
အရ်ဗအီးန် အဇါဒါရီ ကျင်းပ ၊ လင်းရှုပင်က် မြို့ ။ ။ photos
အောကျတိုဘာ ၁၁, ၂၀၂၀ - ၁၁:၅၈ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ဆွီဒင် နိုင်ငံ လင်းရှုပင်က် မြို့ တွင် ရှီအာ မွတ်စလင်မ်များ မှ အရ်ဗအီးန် အဇါဒါရီ ကျင်းပ ခဲ့ပါတယ်။
အရ်ဗအီးန် အဇါဒါရီ ကျင်းပ ၊ ဆွီဒင် ။ ။ photos
အောကျတိုဘာ ၁၁, ၂၀၂၀ - ၁၁:၅၁ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ဆွီဒင် နိုင်ငံ အိုဗရို ရှိ မရ်ကဇ် ကရ်ဗလာ တွင် ဆွီဒင် ရှီအာ မွတ်စလင်မ်များ မှ အရ်ဗအီးန် အဇါဒါရီ ကျင်းပ ခဲ့ပါတယ်။
အရ်ဗအီးန် အဇါဒါရီ ကျင်းပ ၊ ထိုင်း ။ ။ photos
အောကျတိုဘာ ၁၁, ၂၀၂၀ - ၁၁:၂၁ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ထိုင်းနိုင်ငံ ပါသွန် မ်သာနီ ရှိ မရ်ကဇ် အေမာမ် ဇမာန်း (အ.ဂျ) တွင် ထိုင်း ရှီအာ မွတ်စလင်မ်များ မှ အရ်ဗအီးန် အဇါဒါရီ ကျင်းပ ခဲ့ပါတယ်။
ရှက်ဗ်ဗေ ကျဲဟ်လွန်မ် ရောင်ဇာတောနှစ်ခု ကြား အတွင်း ဖယောင်းတိုင် များမီး ထွန်းညှိ ။ ။photos
အောကျတိုဘာ ၁၁, ၂၀၂၀ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
အဗ်နာ ။ ။ ရှက်ဗ်ဗေ ကျဲဟ်လွန်မ် ရောင်ဇာတော်နှစ်ခု ကြား နှစ်ခု (အေမာမ် ဟိုစိန် (علیه السّلام ) နှင့် ဟဇရသ် အဘာစ် (علیه السّلام ) ) တို့ အကြား အရ်ဗအီးန် အတွင်း ဝမ်းနည်းပူဆွေး ခြင်း အထိမ်းအမှတ် ဖြင့် ဖယောင်းတိုင် များ မီးထွန်းညှိ နေသည့် ပုံရိပ် အချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟရ်ှဒ်ဒေ ရှဟ်ဘီ (ခ) ပြည်သူ့ စစ်တပ် ၏ ရောင်ဇာတော် နှစ်ခု အကြား အရ်ဗအီးန် အဇါဒါရီ ။ ။photos
အောကျတိုဘာ ၁၀, ၂၀၂၀ - ၁၁:၅၁ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ အီရတ် နိုင်ငံ ဟရ်ှဒ်ဒေ ရှဟ်ဘီ (ခ) ပြည်သူ့ စစ်တပ် ၏ ရောင်ဇာတော် နှစ်ခု (အေမာမ် ဟိုစိန် (علیه السّلام ) နှင့် ဟဇရသ် အဘာစ် (علیه السّلام ) ) တို့ အကြား အရ်ဗအီးန် အဇါဒါရီ ပြုလုပ် နေသည့် ပုံရိပ် အချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ရှက်ဗ်ဗေ ကျဲဟ်လွန်မ် အေမာမ် ဟိုစိန် (علیه السّلام ) ၏ ရောင်ဇာတော် အတွင်း မြင်ကွင်း ။ ။photos
အောကျတိုဘာ ၁၀, ၂၀၂၀ - ၁၁:၃၃ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ရှက်ဗ်ဗေ ကျဲဟ်လွန်မ် အေမာမ် ဟိုစိန် (علیه السّلام ) ၏ ရောင်ဇာတော် အတွင်း မြင်ကွင်း များ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျဲဟ်လွန်မ် အဇါဒါရီ ကျင်းပ ၊ သြစတေးလျ ။ ။photos
အောကျတိုဘာ ၁၀, ၂၀၂၀ - ၁၁:၁၅ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ သြစတေးလျနိုင်ငံ ၏ မြို့တော် ကင်ဘာရာ တွင် ကျဲဟ်လွန်မ် အဇါဒါရီ ကျင်းပ နေသည့် ပုံရိပ် အချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုနှစ် အရ်ဗအီးန် အစီအစဉ် နှင့် ဇေယာရသ်ပြုသူ ၁၄သန်း နှင့် ၅သိန်း ပါဝင် တက်ရောက်
ဟဇရသ် အဘာစ် (علیه السّلام) ရောင်ဇာတော် ဘက် မှ ယခုနှစ် အရ်ဗအီးန် အတွက် လာရောက် သူ အရေအတွက် မှာ ၁၄သန်း နှင့် ၅သိန်း ရှိ ကြောင်း ကြေညာ ခဲ့ပါတယ်။
အရ်ဗအီးန် အလံ ထွက် ၊ ဂျာမဏီ ။ ။ photos
အောကျတိုဘာ ၈, ၂၀၂၀ - ၁၁:၅၈ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ဂျာမဏီ (ဂျာမနီ ) နိုင်ငံ ဂိုလန်မြို့တွင် ရာနှင့်ချီသည့် ရှီအာ မွတ်စလင်မ်များ နှင့် အဲဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ) ကို အချစ်ထား သူများ စုပေါင်း၍ အရ်ဗအီးန် အလံ ထွက်ခဲ့သည့် ပုံရိပ် အချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အရ်ဗအီးန် ခြေလျင် ဇေယာရသ် သွားသည့် လမ်းတွင် မြင်ရသည့် ကလေးငယ်များ ။ ။ photos
အောကျတိုဘာ ၈, ၂၀၂၀ - ၁၁:၅၇ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ အရ်ဗအီးန် ခြေလျင် ဇေယာရသ် သွားသည့် လမ်းတွင် ကလေးငယ်များ ကို အားတက်ဖွယ် တွေ့ မြင်နိုင်ပါတယ်။
ယခုနှစ် အဲရ်ဗအီးန်နေ့ (ကျဲဟ်လွန်မ်နေ့ ) ကရ်ဗလာ ၏ မြင်ကွင်း ။ ။ photos
အောကျတိုဘာ ၈, ၂၀၂၀ - ၁၁:၄၅ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့ သည် ယခုနှစ် (၂၀၂၀) အဲရ်ဗအီးန်နေ့ (ကျဲဟ်လွန်မ်နေ့ ) ဖြစ်ပါတယ်။ ကရ်ဗလာမြို့ တွင် အေမာမ် ဟိုစိန် (အ.စ) ၏ ဇေယာရသ် ပြုရန် အီရတ် နိုင်ငံ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ ရောက်ရှိလာသည့် ရှီအာမွတ်စလင်မ်များ အား ၊ အားရဖွယ် တွေ့ မြင်နေရသည့် မြင် ကွင်းအချို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဤ ၂၀၂၀ နှစ် ကျဲဟ်လွန်မ် သည် ကိုရိုနာ ရောဂါ ကပ်ဆိုး ကြီးကြောင့် နိုင်ငံအသီးသီးမှ ရှီအာ မွတ်စလင်မ်များ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ) ကို အချစ်ထားကြသူများ မရောက် နိုင်ခဲ့သည့် နှစ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အရ်ဗအီးန် နှင့် ဆဖရ်လ နောက်ဆုံး ၁၀ရက် အထိ အာယာသွလ္လာဟ် ဝဟီးဒ် ၏ ရုံး တွင် မဂ်ျလစ် အဇါ ကျင်းပမည်
အောကျတိုဘာ ၇, ၂၀၂၀ - ၁၁:၅၇ ညနေ
အရ်ဗအီးန် နှင့် ဆဖရ်လ နောက်ဆုံး ၁၀ရက် အထိ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဝဟီးဒ် ခိုရာစာနီ ၏ ရုံး တွင် မဂ်ျလစ် အဇါ ကျင်းပမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
အောကျတိုဘာ ၆, ၂၀၂၀ - ၁၁:၅၆ ညနေ
ကျဲဟ်လွန်မ် မှ ပေးသည့် သင်ခန်းစာ အမည် ဖြင့် လက်ကမ်း စာစောင်များပြင်သစ် တွင် ဖြန့် ဝေ ။ ။ photos
အဗ်နာ ။ ။ ကျဲဟ်လွန်မ် နီးလာသည်နှင့်အမျှ ဥရောပ တိုက်နေ ရှီအာများ အနေဖြင့် ကောင်းမြတ် တန်ဖိုးရှိသည့် ခြေလှမ်း တစ်လှမ်းကို လှမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ ကျဲဟ်လွန်မ် (ခ) အရ်ဗအီးန် မှ ပေးသည့် သင်ခန်းစာ အမည် ဖြင့် ဥရောပ တိုက် တစ်ခုလုံး အတွက် လက်ကမ်း စာစောင်များ ကို ဖြန့်ဝေ ရန် အစီအစဉ် ရှိပါတယ်။ လက်ရှိတွင် နယ်သာလန် နိုင်ငံ နှင့်ဘယ်လ် ဂျီယံ နိုင်ငံ များ ဖြန့်ဝေ ပြီးနောက် ပြင်သစ်နိုင်ငံ တွင် လက်ကမ်းစာစောင် အား Masks ၊ သောက်ရေသန့်များ ပန်းများ နှင့်အတူ ဖြန့်ဝေလျက် ရှိပါတယ်။ ပြီးနောက် အီတလီ စသည်ဖြင့် နိုင်ငံများ တွင် ဖြန့်ဝေ သွားမည် ဟု သတင်း ရရှိထားပါတယ်။
၂၀၂၀ နှစ် ကျဲဟ်လွန်မ် ကရ်ဗလာ ဇေယာရသ် ခြေလျင်ခရီးကို အီရန် လူမျိုးများ မရောက် လာသည့် အတွက် ဝမ်းနည်းနေကြသည့် အီရတ် ကလေးငယ်များ ။ ။video
အောကျတိုဘာ ၅, ၂၀၂၀ - ၁၁:၅၈ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ၂၀၂၀ နှစ် ကျဲဟ်လွန်မ် ကရ်ဗလာ ဇေယာရသ် ခြေလျင်ခရီး ကို အီရန် လူမျိုးများ မရောက်လာသည့် အတွက် ဝမ်းနည်းနေကြသည့် အီရတ် ကလေးငယ်များ ၏ ဗီဒီယို ကလစ် လေး ဖြစ်ပါတယ်။
ကူဖွာ မြို့ မှ ကရ်ဗလာ မြို့ သို့ ၂၀၂၀ ကျဲဟ်လွန်မ် ခြေလျင် ဇေယာရသ် အတွက် ခြေလျင် သွား နေသည့် မိုအ်မေနီ မိုအ်မေနသ်များ ။ ။ photos
အောကျတိုဘာ ၄, ၂၀၂၀ - ၁၁:၅၇ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ကူဖွာ မြို့ မှ ကရ်ဗလာ မြို့ သို့ ၂၀၂၀ ကျဲဟ်လွန်မ် ခြေလျင် ဇေယာရသ် အတွက် ခြေလျင် သွား နေသည့် မိုအ်မေနီ မိုအ်မေနသ်များ ၏ ပုံရိပ် အချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၂၀ ကျဲဟ်လွန်မ် ခြေလျင် ဇေယာရသ် သွား သူများ ကို ကူဖွာ မြို့ ၊သူများ ဧည့် ခံ ။ ။ photos
အောကျတိုဘာ ၄, ၂၀၂၀ - ၁၁:၄၂ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ၂၀၂၀ ကျဲဟ်လွန်မ် ခြေလျင် ဇေယာရသ် သွား သူများ ကို ကူဖွာ မြို့ ၊သူများ ဧည့် ခံနေသည့် ပုံရိပ်အချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျဲဟ်လွန်မ် ဇေယာရသ် အတွက် ကရ်ဘလာ ဘက် သို့ ခြေလျင်ခရီး သည်များ ။ ။photos
အောကျတိုဘာ ၁, ၂၀၂၀ - ၁၀:၀၁ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ယခုနှစ် ကျဲဟ်လွန်မ် ဇေယာရသ် အတွက် အီရန် နိုင်ငံ အရှေ့ ပိုင်းမှ ကရ်ဘလာ ဘက် သို့ ခြေလျင်ခရီး သည်များ ကို မြင်တွေ့ နေရသည့် မြင်ကွင်း အချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အရ်ဗအီးန် အဇါဒါရီ ၊ဘင်္ဂလားဒေရှ့် ။ ။photos
အဗ်နာ ။ ။ ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နိုင်ငံ နူးရန်ဂါ မြို့ တွင် အရ်ဗအီးန် နေ့တွင် ကျင်းပနေသည့်အဇါရီ ဆိုင်ရာမြင်ကွင်း ဖြစ်ပါတယ်။